Nhau - Amazon inodzima sei isingabhadharwi mutengi odha?
MaAmazon anodzima sei asina kubhadhara mutengi odha?
MaAmazon FBA anobvisa sei asina kubhadhara mutengi odha? Pakutanga, maodha asina kubviswa kubva kune vatengi uye maresi asina kugamuchirwa kubva kune vatengi anogona kukanzurwa. Muchiitiko ichocho, nzira dzakananga dzeAmazon dzekudzima maodha dzicharatidzwa pazasi.
Maitiro eAmazon FBA kudzima risingabhadharwe mutengi odha:
Kanzura maodha chero nguva kubva kune vatengi maodha paaccount>
Amazon FBA muUnited States inogona kukanzura odha kana odhiyo yevatengi isina kuunzwa, asi haigone kumiswa mushure mekusvitswa. Ruzhinji rwemamwe masaiti haakwanise kudzima maawa mashoma mushure mekuisa odha. Panguva ino haudi kuita kusarudza kudzoka.
Amazon FBA kukanzura odzo iri nyore, chero nguva muaccount yako> yakoorder, tsvaga mutengi odha iwe yaunoda kukanzura, kukanzura chero nguva inogona.
Amazon inopa nzira nhatu dzekudzoka, dzinova:
1.Upsdrop-off: kana iwe ukatumira zvinhu kunzvimbo yeUPS sewe wega, mari yekudzoka ichave $ 4.98, iyo ichabviswa pamubhadharo;
2.Uppick-up: Kana iwe ukadzorera zvinhu nekuda kwezvikonzero zvako pachako, zvinoda madhora matanhatu, ayo anotorerwa kubva pakudzoserwa.
3.Selfrreturn: Tumira iyo kune iyo posvo hofisi nemutengo wako wega.
Nekuti isu tinoda iyo yekufambisa kambani kuti itibatsire kubudirira kudzosera zvinhu, isu tinofanirwa kutaurirana nevatengi sevhisi yako yekufambisa kambani uye tofunga kuti mamwe makambani ekufambisa anopa iyo yekudzosa sevhisi, asi ivo vanofanirwa kubhadharisa mutengo.
Saka maAmazon angadzimise sei chigadzirwa chakatobhadharwa kare?
Amazon inodzima zvigadzirwa zvakabhadharwa:
Kudzoserwa Kwekudzima: Kana iyo odha ikamiswa mushure mekubudirira kwekubhadhara, Amazon ichagadzirisa kudzoreredzwa mukati mezuva rimwe ("Amazon Refund Processing Nguva") mushure mekurairwa kwevatengi. Kana chete zvimwe zvigadzirwa zvakamiswa, Amazon ichagadzirisa yako kudzoserwa mukati mezuva rimwe rekubudirira kutumira kwezvasara zvigadzirwa. Iyo online refund peji inogona kutariswa pane yangu> account.
Kuti uwane mamwe maficha eAmazon FBA, Ndokumbira ubhadharire kune YiXing Global Logistics, www.paharare.com , Inogona kukubatsira iwe chero kupi senge seAmazesi Kero, Bhizinesi Kero & Yakavanzika Kero Kuendesa.